တရုတ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးကာကွယ်မှုကိရိယာ 60KA AC Surge Lighting Arrester SPD စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | ထင်း
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိရိယာ 60KA AC Surge Lighting Arrester SPD
Solar Power Surge Protection Device 60KA AC Surge Lighting Arrester SPD (တိုတောင်းသော AC SPD၊ alias, surge suppressor, surge arrester) သည် TN-S, TN-CS, TT, IT စသည်တို့၊ AC 50 / 60Hz ၏ power supply system အတွက်သင့်လျော်သည်။ <380V ။ SPD သည်အပူလွန်ကဲခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းအတွက်ပျက်ပြားသောအခါပျက်ကွက်မှုသည်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအား power supply system မှသီးခြားခွဲထုတ်။ အချက်ပြ signal ကိုပေးလိမ့်မည်။ Solar PV Systems တွင် operating voltage ရှိသည့်အခါ၎င်း module ကိုအစားထိုးနိုင်သည်။
ဝင်ရိုးစွန်းအမှတ် .: 1P, 2P, 3P, 4P
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား: AC အ 275V, 385V
~ Imax တွင်စီးဆင်းသောလက်ရှိ (8 / 20s): 10kA ~ 20kA, 20kA ~ 40kA, 30kA ~ 60kA
တုံ့ပြန်မှုအချိန် :: <25ns
AC Surge Arrester SPD 1P၊ 2P, 3P, 4P ၏အားသာချက်များ
၁။ TOWSP AC Protective Arrester SPD ကို AC 50 / 60Hz, <380V ရှိ TT, TN-S, TN-C, IT, TN-CS နှင့်စသည်တို့တွင်သင့်တော်စွာအသုံးပြုသည်။
၂။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးသည့်ကက်ဘိနက်၊ ဆော့ဗ်ဝဲ၊ switch ဗီရို၊ AC ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်စသည်တို့ကဲ့သို့သောစနစ်ပါဝါကာကွယ်မှုအတွက်သင့်တော်သည်။
၃။ TOWSP AC Protective Arrester SPD သည်လျှပ်စစ်နှင့်တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်သောလျှပ်စီးနှင့်အခြားယာယီဗို့အားမှကာကွယ်ရန်။
၄။ အဆောက်အ ဦး နှင့်ကြမ်းပြင်တစ်ခုစီတွင်အပြင်ဘက်ထည့်သွင်းထားသည့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းအကွက်
၅။ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများသည်မြင့်မားသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွမ်းရည်ရှိသည့်သတ္တုအောက်ဆိုဒ် vristor အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
7. ယုံကြည်စိတ်ချရသောထိန်းချုပ်မှု Thermo Dynamic Control disconnector ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ထိန်းချုပ်မှုကိရိယာအတွက်ဝေးလံခေါင်သီအချက်ပြအဆက်အသွယ်နှင့်အတူ 8. ။
AC Protective Arrester ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ AC SPD 1P, 2P, 3P, 4P
ပုံစံအမည် TOWSP-B60 TOWSP-C40 TOWSP-D20
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတန်း B C D
ဝင်ရိုးစွန်းအမှတ် 1P, 2P, 3P, 4P
အမည်ခံထုတ်ကုန်လက်ရှိ (8 / 20s) (ခုနှစ်တွင်) 30kA 20kA 10kA
မက်စ် စီးဆင်းမှုလက်ရှိ (8 / 20s) (Imax ။ ) 60kA 40kA 20kA
ဗို့အားအကာအကွယ်အဆင့် ~ 1.5KV ~ 1.3KV ~ 1.0KV
အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် -40C + 80C
အပြင်ဘက် Shell ၏ပစ္စည်း မီးလျှံတားဆေးပစ္စည်းများ
AC Protective Arrester AC SPD 1P၊ 2P, 3P, 4P ပုံဆွဲခြင်း
ရှေ့သို့ AC အသေးသေး Circuit Breaker 63 Amp 1P 2P 3P 4P AC MCB
နောက်တစ်ခု: IP66 ပါဝါဖြန့်ဖြူးခြင်းသေတ္တာတိုက်နယ်အနိုင်အထက်ဖုံးလွှမ်းထားသောမိုးလေဝသကာကွယ်မှုစနစ်
AC circuit ကို arrester
arrester switch ကို
အကာအကွယ် device ကိုမြင့်တက်